ချောကဆံပင်ကျွတ်တာကိုဖြစ်စေနိုင်သလား။ | Santotoro
ဦး ရေပြားနှင့်ယားယံယားယံသော ဦး ရေပြားသည်ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်ပါသလား။
Posted on မတ် 2, 2019 by admin
HCA UK ၏ London Bridge ဆေးရုံမှအရေပြားအထူးကုဆရာ Dr. Sharon Wong ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ယားယံခြင်း၊ ဦး ရေပြားနှင့်မည်သည့်အရာများအားရှာဖွေတွေ့ရှိရခြင်းများအကြောင်းများစွာမသိရှိကြကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဆံပင်ရိတ်အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းဟုခေါ်သည့်နှင်းခူရောဂါဟုခေါ်သည်။ ချောကလတ်သည်အရေပြားယားယံခြင်း၏အဓိကလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ Dandruff သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူ ဦး ရေ၏ ၅၀% ကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဝံကရှင်းပြသည်မှာသွေ့ခြောက်မှုသည်သဘာဝမှဖြစ်ပေါ်သောတဆေးကြောင့်သင်၏ ဦး ရေပြားရှိအဆီများကိုစားသုံးသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနပြုချက်အရမျက်နှာပြင်ဘက်တီးရီးယားများသည်မညီမျှမှုကို အသုံးပြု၍ ချွတ်ယွင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Dandruff ကဆံပင်ဘယ်လောက်သန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းမရှိပါဘူး။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်ခေါင်းလျှော်ရည်မသောက်ခြင်းသည် ဦး ရေပြားနှင့်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသူမကဆိုသည်။
ဆံပင်ကိုပုံမှန်ဆေးကြောခြင်းမရှိပါက ဦး ရေပြားမှအဆီများ၊ ဆံပင်ထုတ်ကုန်များနှင့်အရေပြားဆဲလ်များသည်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်စေသည်။
ဦး ခေါင်းခွံသည်အနီရောင်သို့ရောင်လာလျှင်သို့မဟုတ်အနီရောင်နှင့်အလွှာများသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားနေရာများသို့ပျံ့နှံ့သွားပါကလူတို့သည်ဆရာဝန်နှင့်ချိန်းဆိုသင့်သည်။ ၎င်းသည် psoriasis, eczema သို့မဟုတ်ကုသရန်လိုအပ်သောဖန်းဂတ်စ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည်။
ငါတို့ရွေး ဦး ရေပြားနှင့်ယားယံယားယံသော ဦး ရေပြားသည်ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်ပါသလား။
Psoriasis သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိလူ ဦး ရေ၏ ၂% ခန့်တွင် ၁.၈ သန်းခန့်သက်ရောက်သည်။ အနီေရာင်, …
သင့်ရဲ့အစားအစာကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ psoriasis ကူညီနိုင်သလား?
လူနာ၏ထုတ်လုပ်သူ Gemma သည် ဦး ရေပြားနှင့်ပြwithနာများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူမသည်သူမ၏မိသားစုဆရာဝန်ကသူမကို psoriasis ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သူမညွန်ကြားထားသည့်ကုသမှုများသည်အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ၎င်းသည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုသိသိသာသာဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသူမစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ သူမသည်လန်ဒန်တံတားဆေးရုံတွင် Wong နှင့်တိုင်ပင်ရန်သူမ၏ရောဂါလက္ခဏာများအောက်သို့ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ပို့ခဲ့သည်။
Gemma ကိုလေ့လာပြီးနောက် Wong ကသူမရဲ့အခြေအနေကို ‘pityriasis amiantacea’ လို့ခေါ်ပြီး ဦး ရေပြားကိုချုံ့ပေးတယ်။ ၎င်းသည် psoriasis သို့မဟုတ် ekzema ကဲ့သို့သောအရေပြားအခြေအနေရှိပြီးယခင်က Gemma ကြုံခဲ့ရသောဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ Dandruff သည်ပြင်းထန်သောအခြေအနေမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကြာရှည်စွာမကုသပါကထူထပ်သောအလွှာများကို ဦး ရေပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် pityriasis amiantacea ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်ကြီးထွားမှုကိုနှောက်ယှက်နိုင်ပြီးယာယီဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံဆေးဝါးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ လူနာလက်လှမ်းအက်ပ်မှတဆင့်ယနေ့ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ။
ကံကောင်းတာက Wong မှာအစီအစဉ်ရှိတယ်။ သူမသည်ထုတ်ကုန်သုံးမျိုးဖြစ်သော Sebco (ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေး၊ salicylic acid နှင့်အုန်းဆီတွင်ရောနှောထားသောဆာလ်ဖာ)၊ Capasal ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် Diprosalic ဟုခေါ်သော steroid မုန့်များ – ချိန်ခွင်ကိုဖြိုဖျက်ရန်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Gemma သည်သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်သွေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်အကြံပေးခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Wong အားငါ Diprosalic ဆေးကိုအရင်ကမသုံးဖူးဘူးလို့ပြောတယ်၊ သူမကဒီတစ်ခါတော့တခြားပစ္စည်းတွေကပြားတွေကိုဖြိုဖျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသုံးပြုဖို့တစ်ခုခုဖြစ်တာကြောင့်မှန်ကန်စွာသုံးမယ်ဆိုတာကိုသူမစိတ်ချစေခဲ့တယ်။ ထိပ်မှာ “ Gemma ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Wong သည် Gemma အတွက်အောက်ပါအစီအစဉ်ကိုအကြံပြုသည် –
သင်အိပ်ယာမ ၀ င်ခင် Sebco ကိုညှပ်ပြီးသင့် ဦး ရေပြားထဲသို့ပွတ်ပေးပါ။ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာလက်သုတ်ပုဝါနဲ့အိပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ ၎င်းသည်အကြေးခွံများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမုန့်သည် ဦး ရေပြားကိုထိရောက်စွာထိုးဖောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဖြစ်မကြာမီသင်နိုးပြီးတာနဲ့ Diprosalic မုန့်ပေါ်တွင်တင်။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာအောင်ထားပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုစတီးရွိုက်မုန့်အကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားပြီးယားယံမှုကိုသက်သာစေရန် Capasal ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာအနံ့မပျောက်ပါစေနှင့်!
Gemma အတွက်, ဒီကုသမှုအစီအစဉ်ကိုလှည့်ကွက်ပြုတော်မူသည်နှင့်သူမနှစ်များတွင်ပြုသည်ထက်သူမ၏ဆံပင်နှင့်အတူပိုပြီးယုံကြည်မှုခံစားရသည်။ သို့သော်အသားအရေအခြေအနေအားလုံးကဲ့သို့ကုသမှုတစ်ခုသည်လူတစ် ဦး အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအခြားတစ် ဦး အတွက်ဘာမျှမလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ကုသမှုအသစ်တစ်ခုမကြိုးစားမီဆရာဝန်သို့မဟုတ်အထူးကုအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်၏အကြံဥာဏ်ကိုအမြဲတမ်းတောင်းခံပါ။
ချော Self- စောင့်ရှောက်မှု
ပျော့ပျောင်းသောကူးစက်လွယ်သည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်အိမ်တွင်သင်ကြိုးစားနိုင်စရာများစွာရှိသည်ဟု Wong ကဖော်ပြသည်။ သူမကအောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုအကြံပြုသည် –
ဦး ခေါင်းခွံသည်ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်မုန်းတီးခြင်းဖြစ်လျှင် TGel or Head & ကဲ့သို့သောချောဆီကိုကူညီရန်ရေးဆွဲထားသောဇင့် pyrithione, tar, salicylic acid, selenium sulfide သို့မဟုတ် ketoconazole ပါ ၀ င်သည့်အထူးသဖြင့် anti-dandruff ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ပခုံးများ။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုဆေးကြောခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံးငါးမိနစ်ခန့်ထားရန်နှင့်၎င်းသည်အရေပြားအတွင်းသို့စိမ်ဝင်ရန်အချိန်ရှိသည်။ “
ဆံပင်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ ရေမှုန်ရေမွှားများနှင့် musses များအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး ရေပြားကိုယားယံစေပြီးယားယံခြင်းသို့မဟုတ်အလွှာပါးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဦး ရေပြားမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုစမ်းသပ်ရန်ယားယံခြင်းနှင့်အလွှာပါးခြင်းတို့ရပ်တန့်သွားပြီးနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များကိုဖြည်းဖြည်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ယခင်လေ့လာမှုများအရစိတ်ဖိစီးမှုသည်လူအချို့အတွက်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လူနာများကို yoga ကဲ့သို့သောစိတ်အေးအေးထားရန်နှင့်စိတ်သက်သာမှုရရန်အမြဲအကြံပေးခဲ့သည်။
“ ရောဂါအများစုမှာမူးဝြေခင်းကိုဆေးဝါးကုသမှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အပို -၂၄ (OTC) သံလွင်ဆီကိုမကူညီဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ဦး ရေပြားကအနီဒါမှမဟုတ်ရောင်ရမ်းလာရင်၊ စစ်ဆေးမှုအတွက်ဆရာဝန်ပြပါ။ အကယ်၍ ရောဂါလက္ခဏာများသည် psoriasis ကဲ့သို့သောပိုမိုသောအခြေအနေကိုအကြံပြုပါကအထူးပြုလွှဲပြောင်းမှုအားအကြံပေးလိမ့်မည်။